Xilli uu weli jiro muranka la xiriira guddiga doorashooyinka ayaa waxaa xukuumadda Soomaaliya ay ku eedeysay dowlad Goboleedyada dib u dhaca doorasooyinka dalka iyo arrimaha laysku hayo qaybo kamid ah.
Wasiirka Dubbe ayaa waxa uu intaasi uu ku daray in gaabis kasta ee u yimaada doorashooynka Soomaaliya aysan mas’uul ka aheyn dowladda Soomaaliya.
Eedaymqya wiirka Warfaafinta dowladda Soomaaliya Cismaan Dubbe ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli uu muran ka taagan yahay guddiyada doorashooyinka, isla markaana ay tahay in doorashada Xildhibaannada Aqalka sare ay dhacdo Bisha December oo maalmo qura ay ka harsan tahay.
inaad qof liito tahay waxaa cadayn kuu ah maxamuud sayid nolosha kadhacay inaad daraadiis axmed madoobe utaageerto mideeda kale reer bariga iyo dabaqoodhiyada halkaan wax kusoo qora ayaad isleedahay haku amaanaan daciif hana sheegan bakhti cunayahow latakooro
@Gedo land miyaad waalan tahay.A.A.Xade ma ahan Marexan Gedo iyo Jubaland shaqo kuma lahan.Maxamuud Sayid iyo Axmed Dhuxul waxy la mid yahay warlords kalee ee soo maray Somaliya.
Cayda ma fiicna waa la kala fakar duwanaan karaa,isagoo caytamaya ayaan arkaayay.
Hala kala faaiisaysto.
A.A.Xade waa dadka qaska la wada Jubaland waana Majeerteen.Waqtigii Tigray iyo Uhuru waa dhamaaday.
Hamuumiye waxaan ku weydiiney ma adaa joogey meeshuu A.A.Xade ku dhashey oo umuliso u ahaa kkkkkkk. War xayawaan yahow MJ afkaaga xun ka jeedi oo si raganimo leh wax iskaga dhici maxaa yeeley MJ ma u baahno inay cid kale sheegtaan.
Marexaan waa walaalahayo wax xumaana ma u qabno balse waxaa jira kuwo boon ah oo magaca ka dilaaya sidiinaas adigiyo caallahaas Gedo Land isku sheega. MJ xaarkooda ma gaari kartaan marka afka uraya ka jeediya boon yahay boontu dhashay.
Weligiin Qof xun qabiil ha ku taageerinina,kaba sii daran waxaa jira Shaqsiyaad kooban oo diidan in dadka Soomaaliyeed u noolaadaan sida ay u nool yihiin Dadyoowga adduunka u nool yihiin, waana dhibaato weyn.
In Soomaaliya 30 Sano Dowlad aheyd in 30 Sano oo kale Dowladnimada Soomaaliya la soo celin waayo waa nasiib darro weyn
Taasna sababteeda ay leedahay Shaqsiyaad kooban oo dantooda waxaan aheyn ka shaqeyneyn ,islamarkaana si ay u gaaraan Dantooda gaarka ah waxaay u hoos fariistaan Dowlado shisheeye sida Kenya iyo Emirates,taasna waa wax loo wada jeedo.
Waa kuwa hadda diidan Doorasho iney ka dhacdo dalka Soomaaliya,
Shalay waxaay diideen Doorasho Toos ah,haddana waxaay diidan yihiin Doorasho Dadban!
Ma garanayo nooca Doorashada ay doonayaan.
Beenloow, qof doorasho diidan ma jiro ee waxaa la diidan yahay guddiyada dadka ku jira oo adigoo kale ah oo u naageeyo in Farmaajo dib u soo noqdo